Tapitra ny fe-potoana : tsy fantatra ny tohin’ny famonoam-balala | NewsMada
Tapitra ny fe-potoana : tsy fantatra ny tohin’ny famonoam-balala
Tapitra ny 31 jolay teo ny fandaharanasa nataon’ny Tahirin’ny Firenena mikambana misahana ny ara-tsakafo (FAO), amin’ny famonoam-balala. Andiany fahatelo ity farany ity, nanomboka ny 26 aogositra 2015. Nitotaly 472.388 ha ny velaran-tany voatondraka fanafody famonoam-balala, ka natao an’habakabaka ny 94,8% (345.025 ha), nisakanana ny zotran’ny andiam-balala, ary nandrakofana vondrona andiam-balala ny 127.363 ha.
Manodidina ny 37 tapitrisa dolara ny tetibola nampiasaina tamin’ity andiany fahatelo sady farany ity. Tsy fantatra ny ho tohin’ny fandaharanasa, sady tsy nisy koa ny paikady voafaritra ny aoriany.
Olana tsy ho voavahan’ny fanjakana
Amin’izao fiovaovan’ny toetr’andro izao, tsy misy afaka milaza fa fongana tanteraka ny andiam-balala. Nitrangana olana nandritra ny krizy, tsy nahitana famatsiam-bola, nahatonga ny valala hita hatraty afovoan-tany, faritra mangatsiaka, tsy tian’izy ireny loatra.
Araka ny tatitry ny FAO ihany, sidina an’habakakaba, nampiasana helikopitera ny 95%-n’ny hetsika rehetra. Azo antoka, fa tsy maintsy famatsiam-bola vahiny vao afaka hanaovana an’izany. Hatreto aloha, tsy hita any anatin’ny tetibola isan-taona ny vola hamonoana andiam-balala. Midika izany fa olana miandry ny fanjakana hafa koa ny ady amin’ny andiam-balala, ankoatra ny fijerena ny sosialim-bahoaka amin’ny fidangan’ny vidim-piainana, vokatry ny fepetran’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena tsy maintsy tanterahina.